GTalk ဂျီတော ပြဿနာဖြစ်နေပါသဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှား ဂျီတော online အဖြစ်မမြင်ရဘဲ အားလုံး off-line အနေဖြင့်သာ မြင်နေရကြောင်း အသိပေးပြောကြား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » GTalk ဂျီတော ပြဿနာဖြစ်နေပါသဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှား ဂျီတော online အဖြစ်မမြင်ရဘဲ အားလုံး off-line အနေဖြင့်သာ မြင်နေရကြောင်း အသိပေးပြောကြား။
GTalk ဂျီတော ပြဿနာဖြစ်နေပါသဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှား ဂျီတော online အဖြစ်မမြင်ရဘဲ အားလုံး off-line အနေဖြင့်သာ မြင်နေရကြောင်း အသိပေးပြောကြား။
ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း Gtalk သုံးမရ ……
ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်လောက်ကနေစပြီး Gtalk ကို သုံးမရတော့တာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Gtalk account မှာတော့ online ရှိနေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို offline အနေနဲ့ပဲ မြင်ရပါတော့တယ်။ Offline message လည်း ပို့လို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် Gmail, Google + စတာတွေကနေ ၀င်လို့ရတဲ့ Chat function တွေအားလုံးပါ ပြတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပြတ်တောက်မှုတွေဟာ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ UAE နဲ့ အင်္ဂလန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒီနေ့မနက်ခင်းကတည်းက Google က ပေးထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ အထူးသဖြင့် Gtalk နဲ့ GmailChat တွေဟာ အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
Google ကတော့ သူ့ရဲ့ App Status စာမျက်နှာမှာ Gtalk ပြတ်ရတာကို သူတို့ သတိပြုမိကြောင်း၊ ပြဿနာအဖြေရှာပြီး အဆင်ပြေဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း ထုတ်ပြန်သွားပေးမယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
From ~ IT,News,နည်းပညာ,သတင်း
အင်းဒီနေ့ဂျီတော့တွေလူမရှိတော့လို့လိုင်းကျတယ်ထင်ပြီး modem Router တွေကို restart ချနေတာ။
တို့ကတော့….ကိုဇာဂနာပြောသလို “မီးဖို” မှာပဲချက်တော့မယ်…..
ဖုန်းထဲကနေ၀င်အုံးမှဆိုပီး ဖုန်းကနေဖွင့်တော့လည်း ဘာမှမထူးဘူး
ဟုတ်ပ ကိုချစ်ရင်ထူးရေ ဒီမှာတော့ညနေ၆း၃၀လောက်ကစပြီး…ဖောက်ပြန်နေတာ
လိုင်းပေါ်တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာ တခါမှဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူး ….
ကိုယ်တယောက်တည်းသုံးမရဘူးမှတ်လို့ အားလုံးဖြစ်နေတာ … အခုမှပဲ သိတော့တယ် …. ။